Wasiirka amniga Soomaaliya oo baarlamanku weydiimo badan hordhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
27th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya, C/kariin Xuseen Guuleed ayaa maanta hortagay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxaana su’aalo dhowr ah laga weydiiyey arrimo la xiriira amaanka dalka.
Markii wasiirka amnigu gaaray xarrunta golaha shacabka ayaa gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari wuxuu xildhibaanada ku wargeliyey iney is qoraan, si ay su’aalo u weydiiyaan wasiirka, waxaana is qoray xildhibaano badan.
Weydiimaha xildhibaanadu hordhigeen wasiir Guuleed waxaa ka mid ahaa labada xildhibaan ee dhawaan lagu dilay Muqdisho, shacab lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Muuri, odayaashii lagu laayey degamda Buur-hakabo ee gobolka Baay iyo weerarkii Alshabaab ku qaadday madaxtooyada maailn cad.
Wasiirka oo markii ugu horreysay wax laga weydiiyey weerarkii Al-shbaab ay ku qaadday madaxtooyada Soomaaliya bishii 21-kii Feberaayo, ayaa sheegay inuu weli socdo baaritaanka weerarkaas uu socdo, lana shaacin doono marka lasoo gaba-gabeeyo, sida uu yiri.
Wasiirka oo sidoo kale, su’aalo laga weydiiyey amaanka dalka ayaa sheegay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay laamaha amaanku 8559 xog oo dhammaantood khatar u ah ammaanka dalka iyo xubnaha ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Wasiir Guuled ayaa sheegay in laamaha amaanku ka howlgaleen boqolaal xog oo soo gaaray hay’adaha amaanka, kuwaasoo uu sheegay iney u arkeen kuwa xaqiiqo u ekaan karay.
Wuxuu sidoo kale wasiirku sheegay in weli socoto baaritaan lagu hayo xogo kale oo soo gaaray laamaha amaanka, isagoo dhanka kale xusay in 434-xog ay la wadaageen ciidamada xoogga dalka iyo AMSIOM.
“Xogahaas badankood waxaa laga howl galay, wax badan waa la fashiliyay, laakiin qaarkood ayaa baaritaankeeda socda, waxaan xogaha qaar la wadaagnay ciidanka xooga dalka iyo kuwa AMISOM” ayuu yiri Wasiirka Amniga Qaranka C/kariim Xuseen Guuleed.
Wasiir Guuleed ayaa ka dalbaday xildhibaannada baarlamaanka inay u fududeeyaan hay’adaha ammaanka qaranka howlahooda oo ay ansixyaan sahrciga la dagaallanka argagixisada.
“Dalku wuxuu u baahan yahay sharciyo adaga oo dhinaca ammaanka ah, marka anigoo ka faa’iideysanaya fursaddan waxaan xidhibaannada sharafta leh weydiinayaa inay meel-mariyaan sharciga la dagaalanka argagaxisada oo la hor-keeni doono dhawaan,” ayuu mar kale yiri wasiirka amniga qaranka.
Su’aalo weydiinta wasiirka amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed ayaa sii socon doonta berri ah isniin ah, waxaana weli dhiman 29 oo ka mid ah xildhibaandii isu qoray iney su’aalo weydiiyaan wasiirka amniga qaranka.